တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လူငယ်များရဲ့ အသံ(ကရင်နီလူငယ်) – Federal Journal
တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လူငယ်များရဲ့ အသံ(ကရင်နီလူငယ်)
ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ်၊ နိုဝင်ဘာ ၆၊ ၂၀၂၁
ဓါတ်ပုံ – တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လူငယ်များ စစ်အာဏာရှင် အလိုမရှိ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြစဉ်။
ကရင်နီလူငယ် မျက်မှန် – (KNDF တပ်ရင်း ၁ မှ တပ်ရင်းမှုး) ကရင်နီ တိုင်းရင်း လူငယ်တဦးက လက်ရှိ သွားနေတဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်း အပေါ် ဘယ်လို အမြင်ရှိနေပါသလဲ၊ ဘာတွေ မှတ်ချက်ပေး ပြောပါသလဲ။
မေး။ ။ ဒီနွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ NUG အစိုးရက သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းအပေါ်မှာ တိုင်းရင်းသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုအမြင်သဘောထားရှိသလဲခင်ဗျ?
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော့်တစ်ယောက်ထဲအမြင်ပြောရရင်တော့ NUG ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ် ဘယ်လိုမြင်သလဲ ဆိုတော့ NUG ကတော့ ကျွန်တော်တို့မှီခို ထောက်ပံ့ရမယ့် အစိုးရတစ်ရပ်လည်းဖြစ်သလို ကျွန်တော်တို့မှီခိုလို့ရမယ့် အစိုးရဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က စစ်ကောင်စီကို မကြိုက်ဘူးလေ၊ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တယားကိုမကြိုက်တဲ့အတွက် ကြားကာလလို့ပဲ ကျွန်တော်မြင်တယ်။ NUG သည် ကြားကာလအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက် လိုအပ်တာတွေကို ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ရမှာဖြစ်တယ်၊ အမှီခိုပြုစရာ ကိစ္စတွေရှိရင်လည်း ပြုရမယ်။ သူကလွဲပြီးတော့ အခြားမှီခိုစရာလည်းမရှိဘူးလေနော၊ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ကြည့်ရင်တော့ NUG အစိုးရမှာက လူထုရဲ့မန်းဒိတ်လည်း ပါတယ်ပေါ့၊ လူထုတွေအားလုံး သဘောတူတဲ့ အစိုးရတစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရလို့ ပြောရမှာပေါ့လေ။ NUG အခုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်း ဘယ်လောက်ထိမျှော်လင့်လို့ရနိုင်မလဲဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ တကယ်တမ်းက ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာရော တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာမှာပါ အရွေ့ကတော့ တော်တော်လေးရွေ့တယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ကရင်နီပြည်နယ်မှာ ဆိုရင်လည်း NUG အစိုးရမှာပါဝင်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ ၄ယောက်အထိ ရှိတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ NUG ရဲ့ ဦးဆောင်မှုကတော့ အတိုင်းတာတစ်ခုအထိ ခရီးပေါက်နေပြီလို့ အကြမ်းဖြင်းပြောလို့ရနိုင်တယ်ဗျ။
မေး။ ။NUG အစိုးရက D-Day ခေါ်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းက ဘယ်လိုပြောင်းသွားသလဲဗျ?
ဖြေ။ ။ အပိုင်း ၂ ခုကို ကျွန်တော်ပြောရလိမ့်မယ်ဗျ။ နံပါတ် ၁ အပိုင်းကတော့ D-Day ခေါ်တာမခေါ်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် ထူးခြားတယ်လို့တော့ မရှိဘူးခင်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာတစ်ခုကတော့ D-Day မခေါ်လည်း စစ်ကောင်စီကို နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ တော်လှန်တိုက်ခိုက်နေရတာပါပဲလေနော်။ D-Day ခေါ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ကယားပြည်နယ်မှာ ထိုးစစ်တွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာတာပေါ့လေ၊ D-Day ခေါ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ၊ D-Day ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲလို့ပဲ ပြောရမလားမသိဘူး။ အခြားပြည်နယ်တွေမှာလည်း ထိုးစစ်တွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကလည်း အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ထန်တလန်မှာ ဆိုလည်း မြို့လုံးကျွတ်ပြာကျခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေ၊ ကျွန်တော်တို့ ဒီမောဆိုးမှာဆိုလည်း နေအိမ်တွေ အလုံး ၁၀၀ လောက်မီးရွှံ့ခံရတဲ့ဟာတွေ ရှိခဲ့တာပေါ့လေ။ ဒါကတော့ D-Day ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲလို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့လေ။ ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ အားမရတာတစ်ခုရှိတယ်၊ ဘာလဲဆိုတော့ D-Day ခေါ်ပြီးရင် အားလုံး တစ်တိုင်းတစ်ပြည်လုံးက တဟုန်ထိုးနဲ့ စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ကြမယ်လို့ထင်ထားတာကတော့ ထိုက်သင့်သလောက် မလုပ်နိုင်တာရှိတယ်။ ဒါမယ့် D-Day ခေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ လူထုက နည်းမျိုးစုံနဲ့ စစ်ကောင်စီကို ပိုပြီးဖိအားပေးလာတာကို တွေ့ရတဲ့အတွက် အတိုင်းတာတစ်ခုအထိ ကျွန်တော်တို့ စစ်ကောင်စီကို ဖိအားပေး နိုင်တယ်လို့ တွက်လို့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာဆိုရင်တော့ စစ်ကောင်စီတွေ အတော်လေး အထိနာတဲ့ ပြည်နယ်လည်း ဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။ ဒါမယ့် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ စစ်ကောင်စီက ထင်သလောက် ကျွန်တော်တို့သူ့ကို အသာစီးရနေတာမျိုးတော့ မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့။
မေး။ ။ လက်ရှိမှာ ကရင်နီပြည်နယ်မှာကရော စစ်ကောင်စီနဲ့ တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေက ဘယ်လိုရှိလဲ?
ဖြေ။ ။အာဏာစသိမ်းတဲ့ကာလကနေစပြီးတော့ အခုချိန်ထိဆိုရင်တော့ တိုက်ပွဲပေါင်း ၁၀၀ နီးပါးရှိသွားပြီ ပေါ့လေ။ ဒီနေ့မှာဆိုလည်း ဖယ်ခုံမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် မနက် ၆နာရီကတည်းက တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ။ တိုက်ပွဲတိုင်းကတော့ စစ်ကောင်စီဘက်က အထိနာတာများပါတယ်။ စစ်ကောင်စီဘက်က ရာနဲ့ချီပြီး သေဆုံးချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ဘက်က ဆယ်ဂဏ္ဍာန်းလောက်ပဲ ကျသွားတာမျိုး တွေ့ရတာပေါ့။ တလျှောက်လုံးကတော့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က အသာစီးရနေတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်ဗျ။
မေး။ ။ D-Day ခေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကရင်နီပြည်နယ်ဘက်မှာ ဘယ်လိုသောသက်ရောက်မှုတွေရှိလာသလဲ?
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်သိရသလောက်ကတော့ အခုချိန်မှာ ဖမ်းဆီးတာ၊ သတ်ဖြတ်တာကတော့ ပိုများတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ ဖမ်းဆီးတာကတော့ လူဦးရေ တော်တော်များများ ဖမ်းဆီးခံနေရတယ်ပေါ့လေ။ စစ်ကောင်စီက လက်နက်ကိုင်ကိုင် မကိုင်ကိုင် ဖမ်းချင်ရင်ဖမ်းတယ်ပေါ့လေ၊ သတ်ချင်ရင်သတ်တယ်။ ဒါကတော့ D-Day နောက်ပိုင်းမှာ ဒီအခြေအနေတွေရှိတယ်။ နောက်နေအိမ်တွေမှာ လုယက်တယ်၊ ဖျက်ဆီးတယ်၊ အဲဒါတွေက ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အဲဒီလို စစ်ကောင်စီရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရတယ်ဗျ။
မေး။ ။ NUG အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေ ပူးပေါင်းမိတာမျိုးတွေရှိတယ်၊ ဒါမယ့် တချို့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်းခြင်း မရှိသေးဘူး၊ ဒီပူးပေါင်းမှု မရှိသေးတဲ့အပေါ်မှာ ဘယ်လိုမြင်မိလဲ?
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ ဒါဟာ NUG အပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အစုအဖွဲ့တွေ NUG အပေါ်မှာ အယုံအကြည် သိပ်မရှိသေးတဲ့ အခင်းအကျင်းကို ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။ အဲဒါက ဘာနဲ့ဆိုင်သလဲဆိုတော့ NUG အစိုးရနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲကအစည်းတွေကို ဘယ်လောက်အထိ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်သလဲပေါ့လေ။ သေချာတာကတော့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတိုင်းက စစ်ကောင်စီရဲ့ လူမဆန်တဲ့လုပ်ရပ်ကို ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမှ မထောက်ခံဘူး။ မထောက်ခံတဲ့အတွက် တော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့ကြတာပဲလေ။ ဒါကတော့ ရှင်းတဲ့ သာဓက တစ်ခုပဲ။ ဒါမယ့် ဒီအပေါ်မှာ စုပေါင်းပြီးတော့ တိုက်နိုင်မယ့်လမ်းကြောင်းကတော့ NUG အစိုးရအပေါ်မှာ အများကြီးသက်ဆိုင်တယ်ပေါ့လေ။ သူတို့ဘယ်လောက်အထိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ အရှိတရားကိုနားလည်သလဲ၊ အားနည်းသွားတဲ့ အပိုင်းကတော့ NUG အစိုးရနဲ့လည်းဆိုင်တယ်။ အားကောင်းသွားရင်လည်း သူတို့နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ပေါ့လေ။ ကျွန်တော် ကတော့ အကြံပြုချင်တာက တွေ့ဆုံမှုတွေ ဒီထက်ပိုပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုသလို ကျွန်တော်တို့ အထက်စီးကနေဆက်ဆံတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်ဘက်ပါလာအောင် ဒီအချိန်မှာ နှိမ့်ချသင့်ရင် နှိမ့်ချပြီးတော့ ညှိနှိုင်းရေးအတွက် NUG အစိုးရကို ဒီထက်ပိုပြီး လုပ်စေချင်တယ်။
မေး။ ။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေ အားလုံး NUG နဲ့ပူးပေါင်းဖို့နဲ့ စစ်ကောင်စီကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာ အားလုံးပါဝင်လာဖို့ NUG က ဘာတွေလုပ်ဖို့ လိုသလဲ?
ဖြေ။ ။ အဓိကကတော့ ဒီကနေ့စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်ခြင်းက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေက အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်ယူဆတာက NUG အစိုးရကလည်း ပြတ်ပြတ်သားသားရှိသင့်တယ်လို့ ယူဆတယ်။ NUG အစိုးရမှာက ဒဲ့ဝေဖန်ရရင်တော့ တာဝန်မခံရဲတဲ့ကိစ္စတစ်ချို့ရှိတယ်။ ပြတ်ပြတ်သားသား တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းရေး လမ်းကြောင်းနဲ့သာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် မဖြစ်လာနိုင်စရာ မရှိဘူးလို့ ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ ခေါင်းဆောင်တချို့ ထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့အချိန်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် မဆုံးဖြတ်ရဲတဲ့အနေအထားမျိုး ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့လေ။ ဒီကနေ့က ကျွန်တော်တို့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကတော့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ပါဝင်မှုက ဘယ်လောက် အရေးကြီးလဲ ဘယ်လောက်အရေးပါလဲဆိုတာ စဉ်းစားအဖြေထုတ်ပြီးတော့ သေသေချာချာညှိဖို့တော့ အင်မတန်လိုအပ် နေတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။ ပြီးတော့ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုအပြည့်ရှိတဲ့ ညှိနှိုင်းမှုလမ်းကြောင်း မျိုးပေါ့နော့။ NUG ကသာ အဲဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ စစ်ကောင်စီကို တိုက်မယ့်အထဲ ပါလာဖို့ အခက်အခဲမရှိတော့ဘူးလို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
မေး။ ။ ရွေးကောက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတွေ စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ သူတို့လိုချင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရမယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်ပေါ့လေ။ အဲဒီအပေါ်မှာရော ဘယ်လိုမြင်မိသလဲ?
ဖြေ။ ။ ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ သေချာပြောသင့်တဲ့ကိစ္စပဲပေါ့လေ၊ ရခိုင်တို့လိုနိုင်ငံရေးပါတီအချို့ကတော့ စစ်ကောင်စီနဲ့စကားပြောမှာပဲ ဒါက ပြောခွင့်လည်း ရှိမယ်လို့ယူဆတယ်။ ရခိုင်လိုမျိုးကတော့ စစ်ကောင်စီနဲ့ စကားမပြောရင်တောင်မှ စစ်ကောင်စီက သူတို့ကိုကမ်းလှမ်းမှာပဲပေါ့လေ။ သူတို့ကတစ်လျှောက်လုံး ဖိနှိပ်ခံရပြီးတော့ ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပြည်နယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ထွေထွေထူးထူးပြောစရာမရှိဘူး၊ ရခိုင်နဲ့ ပတ်သက်လာရင်တော့။ ဒါမယ့်ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ချို့က အာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းက စစ်ကောင်စီနဲ့ အပေးအယူလုပ်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ အများကြီးရှိတာပဲ။ ပါတီ ၁၀၀ ကျော်ရှိတဲ့အထဲမှာ စစ်ကောင်စီနဲ့ နီးစပ်တာ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရှိတာပေါ့လေ။ ဒါက ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ စစ်ကောင်စီက ဘယ်လိုအခြေနေမျိုးမဆို သူတို့ကပူးပေါင်းမှာပဲလေ။ ဒါမယ့်တစ်ချိန်ကြရင် ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေက လူထုရဲ့ဒဏ်ခတ်မှုနဲ့ မြောင်းထဲရောက်မယ့် နိုင်ငံရေးပါတီတွေပေါ့လေ။ ဒီအခြေအနေမှာ စစ်ကောင်စီနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ဒေသအရေး၊ ပြည်နယ်အရေး၊ တိုင်းပြည်အရေး ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ စဉ်းစားချက်က မဖြစ်နိုင်တဲ့စဉ်းစားချက်ပေါ့လေ။ လူထုရဲ့အခွင့်အရေးကိုမရှေ့ရှုဘဲ လူထုမျက်နှာကိုမထောက်ဘဲ စစ်ကောင်စီနဲ့ ပူးပေါင်းလိုက်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကလည်း တချိန်ကျရင် သဘောမရိုးဘူးပေါ့လေ။ ပြည်သူအပေါ်မှာ သစ္စာဖောက်တယ်။ ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကတော့ လက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
မေး။ ။ ပြည်သူလူထုကတော့ စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေး၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးကို လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဦးဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရော ပြည်သူ တွေပါ ဘာတွေလုပ်ဆောင်ဖို့လိုမလဲ?
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုအမြဲစဉ်းစားတယ်၊ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရော ကျွန်တော်နေတဲ့ပြည်နယ်မှာရော ဒီကိစ္စကမတရားဘူးဆိုတာ အားလုံးလက်ခံထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ဆုတ်လို့ မရဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ လူထုတင်မကဘူး ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေရော လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း မတရားတာကို မတရားတဲ့အတိုင်းကို ကျွန်တော်တို့ တော်လှန်ရမှာပဲ။ နောက်ပြီးတော့ ဒါက တနိုင်ငံလုံးနဲ့ လူတစ်စုက ဖြစ်တဲ့ကိစ္စ၊ တနိုင်ငံလုံးက ဘာလို့မနိုင်ရမှာလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့က တော်လှန်ရေးကိုလုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ခုက အရေးကြီးတာက ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်း သဘောထားကွဲလွဲမယ့်ကိစ္စကို တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ရှားရမယ်။ အမုန်းပွားမယ့်ကိစ္စ သဘောထားကွဲမယ့်ကိစ္စပေါ်လာတာနဲ့အမျှ စစ်ကောင်စီက ဒါကိုအခွင့် ကောင်းယူပြီး သွေးခွဲဖို့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ရာကနေရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆတဲ့အတွက် ဒါက အရေးကြီး သတိထားဖို့တော့လိုတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ လက်မလျော့ဖို့လည်း လိုတယ်။ ဒီစစ်ကောင်စီက အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းပြီးတော့ စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရပ်တွေအတွက် တနေ့ကောင်းကောင်း ပြန်ခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ အဲတော့ စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ အုပ်ချုပ်ရေး နယ်ပယ်ကနေ အပြီးသတ် မောင်းထုတ်နိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းလို့ပဲ ကျွန်တော်တို့တွက်တယ်။ မောင်းထုတ်နိုင်တဲ့အားလည်းရှိတယ် အခုလို အားလုံးစုပေါင်း ပါဝင်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒါပြောချင်တယ်။ ဒီပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့မနိုင်ရင် စစ်ကျွန်ဘဝကနေ ဘယ်တော့မှ လွတ်မြောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီအတွက်ကြောင့် ပြည်သူ့အားနဲ့ စစ်ကောင်စီကိုအပြီးသတ် ချေမှုန်းဖို့လိုတယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။
မေး။ ။ နောက်ဆုံးမေးခွန်းထဲမှာမပါတာမျိုးရှိခဲ့ရင် ဘာများထပ်ပြီး ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာရှိသလဲ?
ဖြေ။ ။ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာ တစ်ခုရှိတယ်၊ ဒီတော်လှန်ရေးဟာ ကျွန်တော်တို့နိုင်နေပြီးသား တော်လှန်ရေး ဖြစ်တယ်။ လွယ်လင့်တကူ လက်လျော့လိုက်လို့ မဖြစ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး စုစည်းမှုအားနဲ့ ဆက်တိုက်ဖို့လို တယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ လူထုကိုမေတ္တာရပ်ခံချင်တာကတော့ တိုက်ခိုက်ရေးသမား တွေကတော့ စစ်ကောင်စီကိုနေ့တိုင်းတိုက်ခိုက်နေကြတယ်။ ဒီအပေါ်မှာလူထုက လက်ခံနားလည်ဖို့တော့ လိုတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ခက်ခဲပါတယ် စစ်ပွဲဖြစ်ရင်တော့ စစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ ရှောင်တိန်းရမယ်၊ ပျက်စီးရမယ်၊ သေကြေရမယ် ဒီဟာတွေကတော့ စစ်ပွဲသဘောသဘာဝပေါ့လေ။ အဲတော့ ဒါကိုနားလည်ပြီးတော့ ဒီဒုက္ခကိုအခုချိန်အတွင်းမှာ ဝိုင်းပြီးခံဖို့လိုတယ်။ အဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီး ကိုလည်း ကျွန်တော်ပြောချင်တာက စစ်ကောင်စီနဲ့ အပေးအယူလုပ်တဲ့ကိစ္စကို အစအဆုံးရှောင်ရှားဖို့လိုတယ်။ အားလုံးက ဝိုင်းတွန်းလှန်ဖို့လိုတယ်။ အားလုံးကဝိုင်းပြီး တိုက်ခိုက်ဖို့လိုတယ်။ ဒါကလူထုရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာက ဒီတော်လှန်ရေးဟာ လူထုတော်လှန်ရေးပဲ လူထုကပဲ အဆုံးသတ်ပေးလိမ့်မယ်။ အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ လည်း ယုံတယ်။
Tags: တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လူငယ်များရဲ့ အသံ, ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ်